एनएमबि माइक्रोफाइनान्सको खुद नाफा ५१.९९% बढ्दा प्रतिसेयर आम्दानी कति ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » एनएमबि माइक्रोफाइनान्सको खुद नाफा ५१.९९% बढ्दा प्रतिसेयर आम्दानी कति ?
काठमाडौं - आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा ४ करोड ५३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खुद नाफा एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले कमाएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । यो नाफा रकम अघिल्लो वर्षको भन्दा ५१.९९% ले धेरै हो । अघिल्लो वर्ष एनएमबिले २ करोड ९८ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मात्र खुद नाफा कमाएको थियो । यता, एनएमबिले अघिल्लो वर्षको तुलनामा खुद ब्याज आम्दानीमा पनि ६५.६८% ले बढोत्तरी गरेको छ । खुद ब्याज आम्दानी चौथो त्रैमासमा १३ करोड ७६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ आर्जन भएको हो । अघिल्लो वर्ष ८ करोड ३० लाख ७२ हजार रुपैयाँमात्र खुद ब्याज आम्दानी भएको थियो । निक्षेप १९ करोडबाट बढाएर ४० करोड ४१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ पुर्याएको यस कम्पनीले कर्जामा भने १ अर्ब ७९ करोड ७१ लाख ३७ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
कम्पनीको खराब कर्जामा पनि केही सुधार आएको छ । अघिल्लो वर्ष १.१५% रहेको खराब कर्जा गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा घटेर ०.९८% मा सीमित भएको छ । चुक्ता पुँजी ११ करोड २७ लाख रुपैयाँ रहेको यस कम्पनीको रिजर्भ कोषमा भने १० करोड ५८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ छ । चुक्ता पुँजीको आधारमा एनएमबिको रिजर्भ कोषलाई धेरै राम्रै मान्न सकिन्छ । यो माइक्रोफाइनान्सले प्रोभिजनमा १ करोड ५३ लाख ८० हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ भने कस्ट अफ फन्ड बढेर ९.३०% पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कस्ट अफ फन्ड ५.२८% मात्र थियो । प्रतिसेयर आम्दानी ४० रुपैयाँ २८ पैसा (वार्षिक) रहेको यो माइक्रोफाइनान्सको प्रतिसेयर नेटवर्थ १९३ रुपैयाँ ९५ पैसा छ ।